Dumarka ayaa ku kala duwan adeegsiga Erayada raga jecelyihiin
Biyo baxa dumarka: Baro 5 astaamood oo aad ku garan karto
Waxaa qalbigaaga ku soo dhacay Shahwada dumarka, waxaad isweydiisay waa maxay kacsiga dumarka, maxaa lagu gartaa biyo baxa dumarka?...
Baro Maahmaahyo Ragga ku saabsan oo cajiib ah
Bosaso ( Erayo Jaceyl ) - Maxaan idin kugu talo galnay maanta? Jawaabta: Maahmaahyo somali ah weliba Maahmaahyo ragga ku saabsan. Maxaan...
Erayo jaceyl oo amaan ah
Muqdisho ( Erayo Jaceyl ) - Sidee loo qoraa erayo amaan ah ama erayo jaceyl oo amaan ah, erayo jaceyl xikmad leh, erayo jaceyl soo...
Tix gaaban oo jacayl ah misana soo jiidasho leh
Sidee loo qoraa Tix gaaban oo jacayl ah misana soo jiidasho leh? Jawaabta wey fududahay. Waxaad ku baran doontaa halkaan. Sida loo qoro ...
Raaxada ninka - sida aad ugu raaxeyn lahayd ninkaaga
Raaxada ninka – Halkaan waxaad ku baran doontaa: Raaxada ninka - sida aad ugu raaxeyn lahayd ninkaaga ama sida aad ugu qancin lahayd...
Raaxada raga ay jecelyihiin
Waxaa qalbigaaga ku soo dhacay raaxada raga ay jecelyihiin waxaad isweydiisay waa maxay raaxada raga ay jecelyihiin? Hadaba waxaa timid...
Sidee loo kiciya dareenka raga?
Waa maxay raaxada raga ay jecel yihiin? sidee ninkaaga ugu raaxeyn kartaa? Waa markii ugu horeysay galmada mana aqaaano sida loo kiciya...
Erayada raga jecelyihiin
Waa maxay erayada raga jecelyihiin – Sidee ku ogaan karaa erayada ninkeyga uu jecelyahay? Jawaabta waa easy. Raga weey ka helaan dumarka...